समुन्द्री केबल काटिँदा पाकिस्तानको इन्टरनेट स्पिड घट्यो, नेपालमा कस्तो छ ? - Birgunj Sanjalसमुन्द्री केबल काटिँदा पाकिस्तानको इन्टरनेट स्पिड घट्यो, नेपालमा कस्तो छ ? - Birgunj Sanjalसमुन्द्री केबल काटिँदा पाकिस्तानको इन्टरनेट स्पिड घट्यो, नेपालमा कस्तो छ ? - Birgunj Sanjal
२८ जेष्ठ २०७९, शनिबार २२:३९
वीरगंज । समुन्द्री केबल काटिँदा पाकिस्तानका विभिन्न भागमा इन्टरनेटको स्पिड घटेको छ । पाकिस्तानका इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले फेसबुक, ह्वाट्सएप जस्ता एप र वेबसाइट प्रयोग गर्दा इन्टरनेट स्पिड सुस्त भएको अनुभव गरेका हुन । पछि समुन्द्री केबलमा समस्या आएका कारण इन्टरनेटको स्पीड घटेको थाहा हुन आएको थियो । त्यहाँ केही समयका लागि मोबाइल डेटा र डीएसएलमा अवरोध आएको टेक्नो प्याक इलेक्ट्रोनिक्सका सीईओ अमिर अल्लावालाले एक सञ्चार माध्यलाई बताएका छन् ।
पाकिस्तानी दूरसञ्चार प्राधिकरण (पीटीई) ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इजिप्ट नजिक एएई-१ (एसिया, अफ्रिका र युरोप) र एसईए-एमई-डब्लूई-५ (मध्य पूर्वी एसिया-मध्यपूर्व-पश्चिम युरोप) क्षेत्रमा दुई ओटा समुन्द्री केबल काटिएको पुष्टि गरेको हो ।दूरसञ्चार नियामकले हाल ती ठाउँका दुई ओटा केबल र इटाली नजिक काटिएको अर्को आईएमई-डब्लूई (इन्डिया, मध्यपूर्व-पश्चिम युरोप) केबल मर्मत भइरहेको बताएको छ । हाल पाकिस्तानको सम्पूर्ण टेलिकम ट्राफिक साधारण अवस्थामा आइसकेको छ ।
यो समस्या पाकिस्तानमा मात्र नभई विश्वका विभिन्न भागमा देखा परेको थियो । नेटब्लकका अनुसार विश्वका विभिन्न देशको इन्टरनेट सेवामा अवरोध आइरहेको छ ।विशेषगरि अफ्रिका र एसियाका देशमा यसले बढी प्रभाव पारेको नेटब्लकले उल्लेख गरेको छ । २५ हजार किलोमिटर लम्बाइ भएको एएई-१ समुन्द्री केबल दक्षिणपूर्वी एसियाबाट युरोपका देशमा फैलिएको छ ।
त्यस्तै इजिप्ट नजिक भएको एसईए-एमई-डब्लूई ५ समुन्द्री केबल समेत काटिएको विभिन्न रिपोर्टहरूमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै इटाली नजिकको आईएमई-डब्लूई केबल पनि नष्ट भएको छ ।आईएमई-डब्लूई (भारत, मध्यपूर्व-पश्चिम युरोप) समुन्द्री केबल १२ हजार ९१ किलोमिटरमा फैलिएको छ । जसले भारतलाई मध्यपूर्व हुँदै युरोपसँग जोडेको छ । यद्यपि हाल समुद्री केबल काटिँदा नेपालको इन्टरनेटमा भने त्यसको कुनै असर नपरेको सेवाप्रदायकहरूले जनाएका छन् ।